Forum | SPACE 17 - Game Hub
Welcome to Board Game Community in Myanmar! Startaconversation or join discussions with your fellow hobbyists!
Share your stories, ideas, news, favorites & more!
Meet old/new friends & schedule/join arranged game tables!
Development of Board Games
For developer community & enthusiasts. Share your stories here!
Reviews, quick guides, why you like it & more!
Is that Rule Correct?
Let's clear your doubts. Both official rules and (official/unofficial) variants will be discussed here!
Education doesn’t have to be boring. What’s your2cents on the idea of incorporating board games in education?
Burmese Carrom ဇယ်တောက်ခုံ
A Burmese Carrom fan abroad reached out to us recently seeking rules clarification & game pieces. Researching for his query makes us feel nostalgic for our childhood memories of playing it with our cousins & neighbor kids. So here it is. The game is called ဇယ်ခုံ /ze khoun/ or လက်တောက်ခုံ /lat tout khoun/ in Burmese. This isadexterity game of skill. Depending on the people who introduced the game, it could be played in many ways. Carrom is just likeadeck of cards. The game is limited only by your imagination. We also played with many house rules during our childhood. Burmese Carrom includesasquare wooden board, 19 numbered circular pieces (ဇယ် ‘ze’ / carrom) in3different colors (eg. 1-9 yellows, 10-18 blues & 19 whites) &abigger circular piece (ဒိုး ‘doe’ / striker). It’s usually played by2to4players or solo. Shooting rules are basically the same as Carrom & you score by striking the pieces into one of the four pockets. When you score, you get another turn. Following are the3most common ways to play this game. Collect as many pieces as you could (“19” being the last one to score). Each piece you collect is worth 1 point & “19”, 2. Highest scoring player wins. If you accidentally score “19” before the others, both “19” & one of your collected pieces are placed back to the center. *Variant: All 1 to 19 pieces must be scored only in order. Otherwise, it must be put back in the center. Each player/team drawsarandom number between 1-19 & be the 1st player/team that scores all drawn number/s. (When other players find out which number you are chasing, they might try to block you.) If you score any other piece, place it back in the center. *Variant: More than 1 piece may be drawn foralonger game. Each team (2vs2 or 1vs1) tries to score all pieces of their color (1-9 yellows or 10-18 blues). Once all9pieces of your team color are scored, go for “19”. The team that scores “19” first wins. Note : If you’d like to increase the difficulty of the game, here’savariant. To score, the striker or the carrom piece must bounce at least 1 border before entering one of the pockets. Otherwise, it must be put back in the center. You may apply this rule only to “19” or all pieces. This isareal game changer. How do you play Carrom? Let us know if your rules are any different from the ones mentioned here. Would you likeaCarrom board at SPACE 17? Vote “Yay” or “Nay”. #Carrom #BurmeseCarrom #BurmeseBilliard #SPACE17 #BoardGame #BurmeseBoardGame #ဇယ် #ဇယ်ခုံ #ဇယ်တောက်ခုံ #လက်တောက်ခုံ
Phone Aung Hane
Designer: Bruno Cathala Average Rating: 7.8 No. of Players: 2-4 (Best: 2) Duration: 40-80 min Complexity: 2.85/5 တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တွေထဲက Naqala တိုင်းပြည်ကို သွားလည်ကြရအောင်။ Sultan ဘုရင်ကြီး နတ်ရွာစံသွားတဲ့အခါ လူမျိုးစုကြီး ၅ စု အပါအ၀င် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ အိမ်ရှေ့မင်းသားလည်းမရှိဘဲ အခက်အခဲဖြစ်နေပါပြီ။ တဘောင်ထဲကအတိုင်းဆိုရင် ထီးနန်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ တိုင်းတစ်ပါးက လူတစ်ယောက် ပေါ်လာတော့မယ်။ သင်က ဒီတဘောင်ထဲက လူတစ်ယောက်များဖြစ်နေမှာလား။ ၅x၆ မြေကွက် ၃၀ ပေါ်မှာ လူမျိုးစု ၅ စုကို နေရာတွေရွှေ့ပြီး အမှတ်တွေကို စုရမယ်။ ကိုယ့်အလှည့်မှာ နေရာတစ်ကွက်ပေါ်က လူမျိုးစုတွေကိုအကုန်ယူ နီးစပ်ရာမြေကွက်တွေကို တစ်ကောင်စီချသွား။ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ တစ်ကောင်က နောက်ဆုံးရွှေ့တဲ့ အကွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုတစ်ခုခုနဲ့ အရောင်တူရင်ရွှေ့လို့ရတယ်။ ပြီးရင် လူမျိုးစု Action လုပ်။ နောက်တစ်ခုက မြေကွက် Action ကိုလုပ်လို့ရရင်လုပ်။ အဆုံးသတ်မြေကွက်က လူမျိုးစု မရှိတဲ့ မြေကွက်ဖြစ်သွားပြီဆို အဲ့မြေကွက်မှာ ကိုယ့်အရောင်ကုလားအုပ်ကိုချ။ Elders (အဖြူ) တွေက တန်ခိုးရှင် (Djinns) ကပ်တွေ၀ယ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ မတူညီတဲ့ တန်ခိုးရှင်တွေက ထူးခြားတဲ့ အကျိုးတွေရအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။ Builders (အပြာ) တွေက အပြာရောင်မြေကွက်တွေအတိုင်းဆနဲ့ အမှတ်တန်းရတယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူး။ ကုန်ပစ္စည်းတွေစုဖို့ကျတော့ Merchants (အစိမ်း) လိုအပ်တယ်။ မတူတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအတွဲတိုင်းအတွက် အမှတ်ရတယ်။ Viziers (အ၀ါ) ကတော့ ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ များများစုရင်စုထားနိုင်သလောက် အမှတ်တွေရမယ်။ Assassins (အနီ) ကတော့ ပြိုင်ဘက်လက်ထဲ ရောက်သွားတဲ့ လူမျိုးစုအကောင်(အဖြူ၊ အ၀ါ) ကို သတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နားက အကွက်မှာရှိတဲ့ အကောင်တွေကိုသတ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အကွက်တွေပေါ်က လူမျိုးစုအကောင်တွေ ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ အကွက် Actions တွေပြောရင်များနေမှာဆိုးလို့ မပြောတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ တစ်လှည့်စီ တစ် Round ပြီး တစ် Round ဆော့ကမယ်။ ‌‌ရွှေ့လို့ လုံး၀မရတော့တဲ့ Round မှာ ဂိမ်းပြီးပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အမှတ်တွေတွက်ပြီး အများဆုံးလူက နိုင်ပါတယ်။ အားသာချက်က တစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲ လုံး၀တူဘူး။ အကွက်တွေကော လူမျိုးစု၅စုရဲ့ အကောင်တွေချပုံကော အမြဲပြောင်းနေတယ်။ ကစားသမားအလှည့် (Player Truns) က တစ် Round ပြီးရင် လေလံပုံစံနဲ့ အလှည့်ပြန်စီရမယ်။ အကွက်ကောင်းမြင်ထားလို့ Round ရဲ့ ၁ နေရာ အလှည့်လိုချင်ပေမယ့် ပြိုင်ဘက်ကလည်း မြင်ရင် လေလံပြိုင်တဲ့အချိန် ဘယ်လောက်သုံးရမှာလဲ ဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဥ်စားဖို့လိုတယ်။ ပြိုင်ဘက်ကို ပိတ်လို့ရတယ်။ အကွက်တွေမြင်ဖို့နဲ့ အလှည့်ကြောင့်ပြောင်းသွားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကို ကြိုတွက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်။ ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ #Strategy ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ #FiveTribes #BoardGame #SPACE17 #Strategy
Designer - Philippe Keyaerts Average Rating: 7.3 No. of Players: 2-5 (Best: 4) Duration: 40-80 min Age: 8+ Complexity: 2.36/5 ဒီတစ်ခါအလှည့်ကျတာကတော့ #SmallWorld ကမ္ဘာငယ်လေးပါတဲ့။ #Monopoly တို့လို Classic game ဘိုးအေကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ #Risk နဲ့ဆင်တယ်။ Risk ကြိုက်တဲ့လူတွေ Small World စမ်းဆော့ကြည့်သင့်သလို SW ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်း Risk ကို စမ်းဆော့ကြည့်သင့်တယ်။ Risk မှာက တစ်ယောက်တည်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လုံးဝအပြတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ရင် ဂိမ်းပြီးတယ်၊ အဲ့လူက နိုင်တယ်။ SW မှာက ကစားသမားဦးရေပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်နှလှည့်ဆော့ရမယ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲ့အလှည့်အရေအတွက်ပြည့်ရင် ဂိမ်းပြီးတယ်။ အမှတ်အများဆုံးလူနိုင်တယ်။ ကစားသမားတွေက ကမ္ဘာငယ်လေးမှာ နေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုတွေ။ ကမ္ဘာငယ်လေးဆိုတဲ့အတိုင်း မြေနေရာက အရမ်းမကျယ်တော့ လူမျိုးစုတွေက နယ်မြေလုရမယ်။ ၂ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်ထိ ကစားလို့ရတယ်။ ကစားသမားအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ကစားရမယ့်မြေပုံက ၄ မျိုးကွဲသွားတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်မှာ အသစ်တိုက်တဲ့နယ်မြေတိုင်းအတွက်ရော အရင်အလှည့်ကတိုက်ထားပြီး သူများကိုယ့်ကိုလာမတိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လာတိုက်ရက်နဲ့ ရှုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပဲဆက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့နယ်မြေတိုင်းအတွက်ရော ပိုက်ဆံရတယ်။ ပိုက်ဆံက အမှတ်ပဲ။ ဒီဂိမ်းထဲမှာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက လူမျိုးစုတွေရဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့ ပါဝါအသီးသီးတွေပဲ။ Dungeons & Dragons ကမ္ဘာနဲ့ World of Warcraft ထဲက Race တွေ Class တွေလိုပဲ။ လူမျိုးစုအားလုံးက တိုက်စစ်၊ ခံစစ်နဲ့ ကြွယ်ဝမှုမှာ အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်အကောင်နဲ့ဘယ်ပါဝါကို တွဲကိုင်ဆော့ဖို့ ရွေးမလဲဆိုတာကတော့ စာဖတ်နိုင်မှ ရမယ်။ လူမျိုးစုတွေရဲ့ Art Work တွေကလည်း အဆန်းလေးတွေ။ Dr. Strange ရယ် Avator ရယ် Gandalf ရယ် ဒီဂိမ်းထဲမှာ ဆုံကြတယ်။ 😂 နယ်ချဲ့ရင်းချဲ့ရင်းနဲ့ အကောင်ကုန်လို့ ဆက်မချဲ့နိုင်တော့ရင် ကိုင်ထားတဲ့လူမျိုးစုကို လက်နက်ချပြီး လူမျိုးစုအသစ်နဲ့ ဆက်ဆော့လို့ရတယ်။ လက်နက်ချတဲ့အလှည့်မှာ သိမ်းထားတဲ့နယ်မြေအလိုက် ပိုက်ဆံရတာကလွဲရင် ဘာမှတော့ ထပ်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ နောက်အလှည့်မှ လူမျိုးစုအသစ်ကို စကိုင်လို့ရမှာ။ ပြီးတော့ ကစားသမားတစ်ယောက်မှာ လက်နက်ချထားတဲ့လူမျိုးစုက တစ်စုပဲရှိလို့ရတာဆိုတော့ နောက်တစ်ခါလက်နက်ထပ်ချချင်ရင် ကိုယ်လက်နက်ချခဲ့တဲ့အရင်လူမျိုးစုက ကမ္ဘာငယ်လေးပေါ်ကနေ ကွယ်ပျောက်သွားမှာ။ ဆိုတော့ ဘယ်အလှည့်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရွေးချယ်မှုက အရေးကြီးတယ်။ - မြေပုံကအရောင်အသွေးစုံပြီး အရမ်းလှတယ်။ - မတူတဲ့ လူမျိုးစုတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပါဝါအဆန်းတွေက မိုက်တယ်။ - Area Control Game မို့ နယ်မြေလုရတာ သဘောကျတယ်။ - Racial Power တွေက အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်။ အမြဲတသမတ်တည်း ဒီကောင်ကိုင်ရင် နိုင်မှာပဲလို့ မရှိဘူး။ - ကစားပွဲရဲ့အဆုံးသတ်ဟာ ကစားသမားတစ်ယောက်ယောက်ပေါ် မမူတည်ဘဲ ဘယ်နှလှည့်ဆို ပြီးမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားလို့ ဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို မျှော်လင့်လို့ တွက်လို့ရတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က ဂိမ်းပြီးချင်ဇောနဲ့ အတင်း Rush ပစ်လို့မရဘူး။ #SmallWorld #Risk #AreaControl #Fantasy #Strategy